कोभिड –१९ विश्वका लागि अन्तिम महामारी होला ! | Pennepal
Home बिचार कोभिड –१९ विश्वका लागि अन्तिम महामारी होला !
अहिले जब कोभिड –१९ महामारीले आफ्नो आधा जीवन विताइसकेको छ, तब यो तर्क अहिले बेअर्थको लाग्न सक्छ कि यो आफ्नो किसिमको अन्तिम महामारी प्रमाणित हुन सक्छ । जब हामीले यसबाट मुक्ति पाउँछौं र यस्तो अवश्य हुनेछ –तब संभव छ कि हाम्रो संसार एक यस्तो समयमा प्रवेश गर्नेछ, जसमा विश्वव्यापी महामारी वा ठूलो संख्यामा हुने रोग इतिहासको कुरा हुनेछ ।
यो महामारीका वारेमा चीनबाट आएको सुरुवाती खबरसंगै मैले जोड दिएर भनेको थिए,‘आगामी १५ वर्षभित्र विश्व कयौं भाइरसकाविरुद्ध ‘अन–डिमान्ड’ खोप र उपचार गर्न सक्षम हुनेछ, अर्थात भाइरस सक्रिय हुनासाथ त्यसको उपचार संभव हुनेछ । यद्यपी भाइरसको प्रभावकारिता चाँडोभन्दा चाँडो विश्लेषण गर्ने क्षमता हामीसंग पहिलेदेखि रहँदै आएको छ ।
दिनदिनै यो क्षमता व्यापक हुँदै जानेछ, जुन खोज र कुनै विशेष प्रजाति, जिन आदी चिन्नमा सहयोगी प्रमाणित होस् । कम्प्युटिङ पावर अर्थात कम्प्युटर प्रविधि र जैविक सूचना विज्ञान विकसित हुँदा एन्टी भाइरस अणुहरूलाई एकैठाउ राख्न संभव हुन सक्नेछ । जसले खोप बनाउन र संक्रमणको उपचारमा सहयोगी प्रमाणित हुनेछ । अवश्य पनि भाइरसले पनि आफे चरित्र परिवर्तन गर्नेछ र मुसा–विरालोको यो खेल चलिरनेछ, तर अन्तिम जित मानवताको हुनेछ ।
यस्तो किसिमको आशावादको तीन ठूला कारण छन् । कम्प्युटर प्रवद्र्धन उद्योग, सिन्थेटिक बाइलोजी वा कृत्रिम जीव– विज्ञानमा जस्तो किसिमको विकास भइरहेको छ, त्यसले रोगको उत्पादनकर्ता पत्ता लगाउन र उपचार दुवैमा क्रान्ति ल्याइ दिएको छ । दोश्रो, खोप आदी बनाउने प्रक्रिया गार्डन मुर (इन्टेलका सहसंस्थापक) को नियमानुसार समयसंगै लगातार सस्तो र राम्रो हुँदै जानेछ । अहिलेको सबै महामारी, जसमा सार्सदेखि लिएर इवोला, जिका र अहिले कोभिड–१९ लाई गन्न सकिन्छ, जैविक र महामारी विज्ञानतर्फ प्रतिभाहरूको धेरैभन्दा धेरै उत्सुकता बढाउनेछ । तेश्रो, कोभिड –१९ महामारीका विरुद्धको लडाईमा राष्ट्रहरूका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, जनहितकारी संघसस्थाले सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै लगानीलाई प्राथमिकता दिनेछन् ।
यी सबै प्रवृतिहरूको संयुक्त नतिजा एक यस्तो संसारको निर्माणका रुपमा देखिनेछ, जसमा संक्रमक रोग, खासगरी भाइरल महामारीलाई एउटै भौगोलिक घेरामा समेटन सम्भव हुनेछ ।
भाइरस अवश्य ज्यानमारा हुनेछ, तर यो धेरै सामान्य कुरा हो । यो केही प्रोटिन र आरएनए वा डिएनए जस्ता अनुवांशिक तत्वको धेरथोर मात्राले बनेको हुन्छ । यसको पुरै विश्लेषण सजिलै गर्न सकिन्छ । सन् २००३ मा सार्स जिनोमलाई २९७२७ न्यूक्लियोटाइड्सलाई संपूर्णरुपमा पर्दाफास गर्न वैज्ञानिकहरूलाई केही महिना लागेको थियो । जबकी कोभिड –१९ अर्थात कोरोना भाइरस (जसको जिनोमको आकार सार्स भाइरसको आकारको बराबरी तत्व) लाई विश्लेषण गर्न चीनियाँ डाक्टरलाई मात्र एक महिना लाग्यो । यस्तो यसकारण सम्भव भयो कि भाइरस विश्लेषणको प्रविधि कम्प्युटरप्रद्योगिकीका कारण सहज बन्दै गएको छ । आजको प्रविधि दुई दशकअघिको प्रविधिभन्दा कयौं गुणा उच्चस्तरको छ । यसैकारण आज कोरोना भाइरसका संक्रमितको जाँच केही घण्टामै सम्भव भएको छ र मूल्य पनि ५००० रुपैयाँकै हाराहारी रहेको छ ।
जहाँसम्म खोप बनाउने र उपचार गर्ने कुरा छ, यसमा पनि परिस्थिति राम्रो बन्दै गएको छ । जैव सूचना र कृत्रिम जीव–विज्ञानको समन्वयले तस्विर बदलिएको छ । कोरोना भाइरस जिनोम प्रकाशित भएको मात्र ४२ दिनमा बायोटेक कम्पनी मोडर्न थेरेप्यूटिक्सले क्लिनिकल परीक्षणका लागि अमेरिकाको नेशनल इन्सिच्युट अफ एलर्जी एण्ड इन्फेक्सन डिजिजलाई खोप पठायो, जुन अप्रिलमा सुरु हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो खोप बनाउन कम्पनीलाई मात्र एक साता लाग्यो । यस्तोमा विश्वास गर्न सकिन्छ कि यो नयाँ भाइरसको खोप चाँडै वजारमा उपलब्ध हुनेछ, किनभने क्लिनिकल परीक्षण पनि अब छिटो र सुरक्षित भइसकेको छ ।
सस्तो र दक्ष कम्प्युटर प्रौद्योगिकी बाहेक नयाँ सफ्टवेयरले पनि खोप बनाउन र औषधिको खोजको पुरा गणित परिवर्तन गरिदिएको छ । यद्यपी यो सुरुवाती अवस्था हो, हामी कहाँ सामान्य भाइरसको पनि खोप उपलब्ध छैन । तर, प्रविधिको विकासले भाइरस– वैज्ञानिक र भ्याक्सिनोलोजीलाई खुसी हुने अवसर दिएकै छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा करियर बनाउन सकिन्छ, पुरस्कार जित्न सकिन्छ र पैसा पनि कमाउन सकिन्छ भनेर यस क्षेत्रका प्रतिभालाई आकर्षित गर्नेछ ।
तपाई हेर्नुहोला कसरी आउने दिनमा विश्वभरी सबै ठाउँमा अनुसन्धान, प्रयोगशाला, संक्रामक रोग, खासगरी भाइरल महामारी तर्फ ध्यान दिन सुरु गर्नेछन् । यसमा सार्वजनिक, निजी र संयुक्त लगानी बढाइनेछ, किनभने सरकारहरू, वहुराष्ट्रिय संगठन, जनहितकारी संघसस्थाले महामारी रोकथामका लागि अपेक्षकृत धेरै संशाधनको विनियोजन गर्नेछन् ।
विश्वले कोभिड –१९ महामारीका विरुद्ध हरेक देशले प्राप्त गरेका सफलता, असफलताबाट शिक्षा लिनेछ । हामी सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग , नियम र प्रकृयाहरूको आशा राख्न सक्दछौं । जस्तोकी आज जुन तदारुकताका साथ आतंकवादी हमलाकाविरुद्धको तयारी छ, त्यो वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको आक्रमण अघि कहाँ थियो ? विश्व महामारीविरुद्ध संसारको रवैया परिवर्तन हुनेछ । भाइरस, व्याक्टेरिया र अन्य रोगविरुद्ध, निश्चय पनि मानवजातिको बढदो कदमलाई साथदिन अघि बढनेछन् । उनीहरू सफल पनि हुनेछन्, किनभने यो प्रकृतिको नियम पनि हो । यसबीच मानव बुद्धिको यो सफलताले यसलाई साँघुरो घेरामा समेटनेछ र जहाँ यसलाई नियन्त्रण गर्न धेरै सजिलो हुनेछ । (अमरउजालाबाट)
शनिबार मात्रै ७ सय ९३ को मृत्यु